မင်လူတို့, ယွမ် Qi & ကျောက်ကပ်
ဘာသာတရား & ဝိညာဉ်ရေး Origins & ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ
by အဲလစ်ဇဘက် Reninger
အဆိုပါနေစဉ် ဒီဂရီမျဉ်း များနှင့် dantian စနစ်များကိုမသိမသာကိုယ်ထည်၏အခြေခံပထဝီသတ်မှတ်ပေးရန် qigong နှင့်တရုတ်ဆေးပညာကအသုံးပြုနေကြတယ်, ကွဲပြားခြားနားသော-မျိုး-of Qi ၏တစ်ဖွဲ့လုံးဘာသာစကားလည်းရှိတယ်ဒီလုံ့လရှိသူမြေပြင်အနေအထားအတွင်းအမျိုးမျိုးသောလုပ်ငန်းစဉ်များစကားပြောကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ Qi ဤပုံစံများတစ်ခုမှာယွမ် Qi သို့မဟုတ်မူရင်း Qi ဟုခေါ်သည်။
ယွမ် Qi ဒုတိယ lumbar အရိုးများ၏အဆင့်မှာ, ကျောက်ကပ်အကြားတည်ရှိသောအရာမင်လူတို့, ကိုခေါ်ကာလုံ့လရှိသူစင်တာထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
(သင်တိုက်ရိုက်ပြန်ကျောရိုးရန်သင့်ခါးကနေတစ်လိုင်းဆွဲလျှင်, ဤသူ Ming အမျိုးသားများအတွက်များ၏ခန့်မှန်းအဆင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ) ကိုကျောက်ကပ်ကလီစာတွေကို-စနစ်နှင့်မင်အမျိုးသားများအကြားဆက်ဆံရေး၏ဒြပ်စင်အကြားဆက်ဆံရေးအားဖြင့်သတ်မှတ်ခံရဖို့ဆိုပါတယ် ရေ နှင့်မီးဘေး ။
ယွမ် Qi, ကျောက်ကပ်, မင်အမျိုးသားများအကြားဆက်သွယ်မှုကို
အောက်ပါကျမ်းပိုဒ်-ရေးဆွဲ Larre ကနေရိုးရာတရုတ်ဆေးပညာ၏ Schatz & Rochat က de အယ်လ် Vallee ရဲ့စစ်တမ်းယွမ် Qi, ကျောက်ကပ်နှင့်မင်အမျိုးသားများအကြားဆက်သွယ်မှု -explores နှင့်ဂျင် (အများ၏တဦးတည်းလည်းဘယ်လို သုံးဘဏ္ဍာ ) ပုံသို့ကိုက်ညီ:
ဒီရှုထောင့်အတွင်း, လူများအတွက် Jing spermatic အရည်ဒါမှမဟုတ် spermatic အရည်ကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့အတွက်ဒေသအုပ်ချုပ်သည့်ယန္တရား၏အခြေခံပစ္စည်းတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါဟာ gonad မဟုတ်ပါဘူး။ မျိုးပွားခြင်းနှင့်လိင်၏ယန္တရား၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ဤ site ကိုဒုတိယ lumbar ချပေးများ၏အဆင့်မှာ, ကျောက်ကပ်နှစ်ခုနှင့်ကျောက်ကပ်အကြားတည်ရှိသော ming ယောက်ျား၏ဒေသဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါနန်ကျင်းခြင်း, 36 ခက်ခဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက် ming ယောက်ျားများ၏အဆင့်မှာ "လူသည်သုက်ပိုး (Jing) သိုလှောင်နဲ့မိန်းမကိုကိုယ်ဝန်၏ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါလုံလုံခြုံခြုံ။ " အဲဒီကပြောပါတယ် (ဤအခြေအနေတွင်ကိုယ်ဝန်၏ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါဟာသားဥအိမ်နှင့်မြေတပြင်လုံးအမျိုးသမီးလိင်အင်္ဂါယန္တရားတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဖြစ်စဉ်များဆိုလို။ )
တရုတ်စာသားများကျောက်ကပ်နဲ့ ming ယောက်ျားအကြားဆက်ဆံရေးရှိသူများဖြစ်ကြောင်းပြောပါ "ရေနှင့်မီးသတ်များ၏နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်အကူအညီများ။ " yin နှင့် yang ၏ကုပ်တွယ်၏ဆက်ဆံရေးဟာပင်၏အပိုင်းငါအစောပိုင်းကောင်းကင်နှင့်နောက်ပိုင်းကောင်းကင်၌ကိုးကားတဲ့စကား, မိတ်ဆက်နှင့်စွမ်းအင်ရရှိခဲ့သည်။ ကျောက်ကပ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း၏အချိန် မှစ. , သူသို့မဟုတ်သူမ၏ဘဝတလျှောက်လုံးတစ်ဦးချင်းစီ၏တွေ့ရှိနေရသည်အာမခံလတံ့သောမျိုးရိုးလိုက်ဆုံးအဖွတျရရှိကြသည်။ ဒါကစောစောကောင်းကင်ဘုံသည်၎င်းတို့၏စပ်လျဉ်းအားဖြင့်တင်စားမှုများကိုဆိုလိုရာဖြစ်တယ်။ အလုပ်များတွင်ကျောက်ကပ် ming ယောက်ျား, မူရင်းသက်တော် (ယွမ် Qi) ၏အခွင့်ထူးခံရာအရပျမြားနှငျ့မူရင်း yin နှင့် yang ၏တွဲဖက်ရာအရပ်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။
အဲဒီမှာဤကျမ်းပိုဒ်တွင်သွားတွေအများကြီးဖွင့်, ကြှနျုပျတို့ရုံများအတွက်တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်ရာ, အထူးသဖြင့်တဦးတည်းအရာမှထွက်ညွှန်လိမ့်မယ် qigong အလေ့အကျင့်။ မင်တစ်ခါတစ်ရံ "ဟုခါး၏အမြစ်များ" ကို "မျိုးပွားခြင်းနှင့်လိင်၏ယန္တရား၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ site ကို" အဖြစ်ဤနေရာတွင်သတ်မှတ် -is အဖြစ်ရည်ညွှန်းနှင့်လည်းမူရင်း၏တွဲဖက်၏အရပျကို "အဖြစ်သောအရပ်ဌာန၌အမျိုးသားများ-တည်ရှိသည် yin နှင့် yang ။ "
အတော်များများကလျှင်မ qigong အများစုပုံစံများကိုသူ Ming အမျိုးသားများအတွက်ဧရိယာ-The ကြောင်းအာနိသင်သေးယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုပုံစံများသို့မတူညီခံရဖို့ပေမယ့်အစားသူ့ရဲ့စုစည်းပြည်နယ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှိရာအရပ်အားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာသို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်္ဂါအတွင်းစွမ်းအင်ကိုတက်တဲ့ drawing အစပျိုး အဆုံးမဲ့အလားအလာများနှင့်နက်ရှိုင်းသောပွညျ့စုံနှစ်ဦးစလုံး။
ဤလုပ်ငန်းစဉ် Neijing Tu အတွက်အမြင်အာရုံကိုကိုယ်စားပြုတာဖြစ်ပါတယ်: များ၏အုပ်စုသတိထားမိ ယဉ်-ယန်သင်္ကေတ ဒီအတွင်းစိတ်-alchemical conjunctio ရန်ပုံ-point ၏မင်အမျိုးသားများအတွက်ဧရိယာသို့တွေထဲမှာအောင်းနေနိုင်ပါတယ်။ အလွန်အေးမြ! အခုတော့မေးခွန်း-နိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျနော်တို့ကတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် bodyminds အတွင်းတိုက်ရိုက်ထိုအမှုအရာတို့ကိုတွေ့ကြုံခံစား .... ?
Dakinis: လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်၏အမျိုးသမီး Icons
ဇင်မာစတာ Hakuin ၏ဘဝ, သွန်သင်နှင့်အနုပညာ
Guru Gobind Singh က (1666 - 1708)
ဂျော့ခ်ျဝါရှင်တန်အကြောင်း 10 Key ကိုအချက်အလက်
Medical School ကျောင်းတွင်အင်တာဗျူးများအမျိုးအစားများ
မစ္စစ္စပီကျောင်းသားများ, K သည်-12 အခမဲ့အွန်လိုင်းပြည်သူ့ကျောင်းများများစာရင်း
10 Deadpan လူရွှင်တော်များ
တစ်ဦးလုပ်ငန်းစဉ်အားသုံးသပ်ခြင်းစာစီစာကုံး 50 ဂရိတ်ခေါင်းစဉ်များ
ကြိယာစိတ်ခံစားချက်စှမျး '' Es + နာမဝိသေသန + Que '' ဖော်ပြချက်ပြီးနောက်
အမေရိကန်တော်လှန်ရေး: ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂျော့ခ်ျရော့ဒ်နီ, Baron ရော့ဒ်နီ
ခရစ်ယာန်ဘာသာအတွက်အိန်ဂျယ်အမျိုးအစားများ (အဆိုပါ Pseudo-Dionysius ကောငျးကငျတမနျ Hierarchy)
အင်္ဂလိပ် Diacritic Marks နှင့်နိုင်ငံခြားရေးဘာသာစကားများဥပမာ
Capricorn အတွက်အင်္ဂါဂြိုဟ်: အင်္ဂါဂြိုဟ်လက္ခဏာများ
Ionic ခြံဝင်း Properties ကို, ရှင်းလင်းချက်
'' Creer '' ၏ conjugation
ရှိတ်စပီးယားရဲ့ဟာသ '' အဘယ်အရာကိုမျှအကြောင်းအများကြီး Ado ''
ရှေးဟောငျးအီဂ Origins နှင့်အတူ5နာမည်ကြီးမြို့ကြီးများ
ယင်းထိပ်တန်း6အမျိုးသမီးများဘောလီဘောကစားသမားကိုသိရယူပါ
Rip လက်ရှိနှင့် Riptide ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်မိုးလေဝသ၏အခနျးကဏ်ဍ
က Tiger Woods '' သမီးဆမ် Alexis ဝုဒ် Is
အားအမည်များနှင့်အတူ NICKNAME Up ကိုကိုက်ညီ
FA ဖလား Winners စာရင်း
အဆိုပါ Mahabharata ၏ပုံပြင်, အိန္ဒိယအရှည်ဆုံး Epic ကဗျာ
Serial အဓမ္မပြုကျင့်သည်ဒါဝိဒ်က Parker Ray ၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို
သင်ကကောလိပ်ထဲက Drop စေချင်သင့်မိဘများကိုပြောပြပါလုပ်နည်း